galmudugnews.com » Ilaalada Qaybdiid oo Jirdishay Wariyayaal Faafiyey Imaanshiyaha Caalin ee Gaalkacyo Home Contact US
Home » WARARKA » Ilaalada Qaybdiid oo Jirdishay Wariyayaal Faafiyey Imaanshiyaha Caalin ee Gaalkacyo Ilaalada Qaybdiid oo Jirdishay Wariyayaal Faafiyey Imaanshiyaha Caalin ee Gaalkacyo galmudug on
No Comment Views 163916Saddex weriye oo uu ka mid yahay weriyaha Bar-kulan ee magaalada Gaalkacyo Axmed Faarax ayaa maanta waxaa garaacay ilaalada General Cabdi qaybdiid Iyadoo Lagu Haytso Tabinta Imaanshiyaha Caalin ee Magaalada Gaalkacyo
Ilaalada Qaybdiid ayaa garaacay suxufiyiinta kaddib markii ay amar ka heleen wasiir Baasto oo weriyeyaasha ku haysta warbixin ay horraantii toddobaadkan ka tebiyeen madaxweynihii hore ee Galmudug, Maxamed Axmed Caalin oo iminka ku sugan magaalada Gaalkacyo.
Weriyeyaasha ayaa ka qeyb galayay kulan ka socday Hoteelka Embassy ee koonfurta magaalada Gaalkacyo Mudo yar ayaa waxaa soogaaray wasiirkiisa Warfaafinta Ahmed Baasto kaddibna wuxuu amar ku siiyay inay isaga tagaan goobta iyagoo aan howshoodii dhammeysan.
Hasa yeeshee saddexda weriye ayaa ku gacan seyray amarkiisa, waxayna taasi sababtay inuu amar ku siiyay ilaaladiisa inay cawaaqibkooda mariyaan weriyeyaasha.
Ilaalada Qaybdiid ayaa isla markiiba baadka qoryihii ay siteen waxay la dhaceen weriyeyaasha, iyagoo sidoo kalena la wareegay qalabkii ay wax ku duubaneyeen. Falka ayaa la sheegay inuu dhacay iyadoo Qaybdiid uu goob-joog ahaa.
Labada weriye ee kale ayaa u kala shaqeeya Royal TV iyo bogga GalmudugTV.
Weriyeyaasha la jir-dilay ayaa cambaareeyay falka oo ay ku tilmaameen mid lagu caburinayo saxaafadda xorta ah.
Kaliya sanadkan, waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 13 weriye iyadoo falal kale oo lagu waxyeelleynayo howlwadeenno saxaafadeed ay ka dhaceen qeybo kale oo ka mid ah dalka.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139501 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31884 hitsContact US - 30589 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26154 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25641 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25274 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23899 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23040 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22370 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22368 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21460 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21119 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21116 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20814 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19877 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19874 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19264 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18507 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17819 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17738 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17682 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16904 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16824 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15536 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15479 hits Home Contact US